Foornooyinka Alaabada Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Shiinaha Foornada
Gaaska gaaska mashiinka kariyaha
Hordhac: Gaaska gaaska mashiinka kariyaha. Taageerada albaabka bidix iyo midig labada dhinac waa 1 lammaane. Badanaa u isticmaal foornooyinka korontada ku shaqeeya. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-07
Daboolka gaaska miiraha gaaska
Hordhac: Daboolka gaaska miiraha gaaska. Foornada foornada labada dhinac ee bidix iyo midig waa 1 lammaane. Badanaa u isticmaal foornooyinka korontada ku shaqeeya. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-19
Lambarka Moodalka: YL-20
Gas kariyaha kariyaha gaaska albaabka
Hordhac: Gawaarida kariyaha gaaska kariyaha bidix iyo bidix midig waa 1 lammaane. Isticmaal fiiqid albaabbada foornada kariyaha gaaska. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-17
Gaaska maqaska gaaska mashiinka wax ku karsha
Hordhac: Gaaska dhagta gaaska mashiinka kariyaha dhagta ah ee bidix bidix iyo bidix waa 1 lammaane. Isticmaal fiiqid albaabbada foornada kariyaha gaaska. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-01
Alwaax bir ah oo bir ah oo aan cufan lahayn oo BBQ ah oo shidan / fargeeto / rooti
Hordhac: Alwaax bir ah oo bir ah oo aan cufan lahayn oo BBQ ah oo shidan / fargeeto / rooti. Isticmaalka leexashada foornada korantada. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-18
Gawaarida khaanadda foornada gaaska kariyaha / sariirta gu'ga
Hordhac: Gawaarida khaanadda foornada gaaska kariyaha / sariirta gu'ga. Isticmaal fiiqid albaabka foornada kariyaha gaaska ama khaanadaha. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-11
Ahama birta saddex geeslaha ah ee biraha BBQ foornada / fargeeto / roaster
Hordhac: Ahama birta saddex geeslaha ah ee biraha BBQ foornada / fargeeto / roaster. Isticmaalka leexashada foornada korantada. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-06
Hordhac: Gas kariyaha kariyaha kariyaha gaaska albaabkiisa bidix iyo midig waa 1 lammaane. Isticmaal fiiqid albaabbada foornada kariyaha gaaska. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-04
Gaaska yar ee foornada kariyaha gaaska ku laalaada
Hordhac: Gaaska yar ee foornada makiinada wax lagu karsado ee albaabka bidix iyo bidix midig waa 1 lammaane. Isticmaal fiiqid albaabbada foornada kariyaha gaaska. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-03
Dhegaha labalaab gaaska makiinada wax lagu kariyo ee albaabka lagu laalaado
Hordhac:Labada dhegood ee gaaska miiraha gaaska miiraha albaabku wuxuu ku yaal bidix iyo dhinacyada midig waa 1 lammaane. Isticmaal fiiqid albaabbada foornada kariyaha gaaska. Qalabka Geriss wuxuu ku habboon yahay guriga, warshadaha iyo sidoo kale foornada korantada, gaar ahaan nooca albaabka culeyskiisu yahay 3 KGS - 15 KSGS in ka badan toban sano.
Lambarka Moodalka: YL-02